Maitiro ekuisa Linux Mint 14 Nadia nhanho nhanho | Kubva kuLinux
Maitiro ekuisa Linux Mint 14 Nadia nhanho nhanho
Kana iwe uri mutsva muLinux, ivo vangangove vakakurudzira iwe kuti uedze Linux Mint: iri nyore uye nyore kushandisa kugovera iyo, nekuwedzera, ine hushamwari uye isingazivikanwe zvinoonekwa zvinoonekwa kune iyo inouya kubva paWindows.
Muchikamu chitsva ichi tinotsanangura maitiro ekuisa Linux Mint 14 Nadia nhanho nhanho ... ehe, ku dummies.
2 Nhanho nhanho kumisikidza
Usati waisa Linux Mint 14, unofanirwa kuita nhanho nhatu:
download iyo Linux Mint ISO mufananidzo.
Pisa iyo ISO mufananidzo kune CD / DVD kana a chinyoreso.
Gadzira iyo BIOS kuti itange kubva kuCD / DVD kana kubva pendrive, zvinoenderana nezvamakasarudza mudanho rekutanga.
GRUB 2, iyo bootloader yeLinux Mint, ichaonekwa. Ini ndakasarudza sarudzo Kutanga Linux Mint.
Kamwe chete Linux Mint bhutsu, tinya pane iyo icon Isa Linux Mint:
Iyo yekuisa wizard ichaonekwa. Chinhu chekutanga kusarudza mutauro wekumisikidza. Sarudza español.
Simbisa kuti unosangana nezvinodiwa zvishoma zvekumisikidza nekudzvanya Enderera. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti icho chete chakakosha chinodikanwa kuve neinodiwa diski nzvimbo. Kuva neinternet yekubatanidza inokurudzirwa asi kwete chinhu chega chinodiwa. sezvo iwe uchizokwanisa kusvetuka kurodha pasi kwemapakeji kana zvasvika kwauri kuve wakasununguka.
Ichi chikamu chakaomesesa: disk kupatsanura. Hedzino mbiri nzira dzekutevera:
a) bvisa yekare sisitimu yekushandisa uye isa. Iyi ndiyo sarudzo yakapusa: bvisa zvese uye nekuisa pamusoro. Hapana chikonzero chekupisa musoro wako nezve kupatsanura diski kana chero chinhu chakadai.
b) kupatsanura dhisiki nemaoko.
Kana iwe ukasarudza iyo yechipiri sarudzo, iyo disk yekuparadzanisa wizard inotanga.
Iyi nhanho inosarudzika. Izvo zvinokurudzirwa chete kune vepakati kana vemberi vashandisi vanoziva kuti izvi zvinorevei. Chero danho risiri iro rinogona kukonzeresa kurasikirwa kwedata pane diski. Kana iwe usiri kuda kuzviisa panjodzi, usazviita.
Kazhinji kutaura, kurudziro yangu ndeyekupatsanura diski muzvikamu zvitatu:
1.- Chikamu mudzi. Iko kuchaiswa system. Iwe unofanirwa kuiisa mu /. Ini ndinokurudzira iyo EXT4 faira fomati. Iyo saizi saizi inofanirwa kuve ingangoita mashanu magigs (5gb yeiyo base system uye zvimwe zvese zvekushandisa iwe zvauri kuzoisa mune ramangwana). Ini ndinodzokorora, uhu ndihwo hushoma saizi, kwete iyo yakanaka iyo (inogona kuve yakatenderedza 2/10 gb).
2.- Chikamu musha. Zvinyorwa zvako zvese zvichavepi. Iwe unofanirwa kuiisa mukati / kumba. Ini ndinokurudzira iyo EXT4 faira fomati. Iko saizi ingori sarudzo yemunhu uye inoenderana chete nekuti uchaishandisa zvakadii.
3.- Chikamu chinjanisa. Space yakachengeterwa pane diski yekuchinjanisa ndangariro (kana iwe uchinge wapererwa ne RAM iyo sisitimu inoshandisa ino diski nzvimbo ku "wedzera" iyo). Ichi chikamu hachigone kusiiwa uye chinofanira kuvapo hongu kana hongu. Saizi yakakurudzirwa ndeiyi: a) yezvikamu zve1gb kana zvishoma, chinja chinofanirwa kuve zvakapetwa ndangariro dzako dze RAM; b) yezvikamu zve 2gb kana zvimwe, chinja chinofanira kunge chiri 1gb.
Kana zvese zvave kugadzirira, tinya OK uye iyo sisitimu inokubvunza iwe kana uchibvumirana neshanduko.
Kana zvese zvagadzirwa, tinya Isa izvozvi. Chinhu chekutanga chichava kusarudza nguva yenguva:
Chinhu chinotevera chatichagadzirisa ichave iyo keyboard. Usakanganwa kuyedza yako yakasarudzwa keyboard (kunyanya akaomeswa makiyi senge ñ, ç uye Altgr + mamwe makiyi musanganiswa). Kana ikasashanda nemazvo, edza mamwe marongero ekhibhodi.
Mushure mekumisikidza iyo keyboard kunouya mushandisi kumisikidza.
Ingoisa zita rekushandisa uye password, zita rekomputa uye uone kana zvichikosha kukumbira password kuti upinde mukati. Kubva pano zvinokwanisika kunyorera yako pachako folda, iyo yandisingakurudzire (nekuti inogona kudzora system) kunze kwekunge iwe uchinyanya kunetseka nezve kuchengetedzeka kwemagwaro akachengetwa pamushini iwoyo.
Chekupedzisira, iyo faira kopi ichatanga uye mifananidzo ichave ichiratidzwa ichiratidza zvimwe zvekunaka kweLinux Mint.
Kana zvese zvave kugadzirira, unogona kudzoreredza kana kuenderera kuyedza iyo system.
Pakupedzisira, reboot uye bvisa iyo disk / pendrive.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Maitiro ekuisa Linux Mint 14 Nadia nhanho nhanho
Ndakaedza kuisa LMDE 201303 pachikamu chakawedzerwa.Ndanga ndahwina 7 uye ubuntu 13.04 yakaiswa.Ndakabvisa zvachose ubuntu nekukiya muchina.Ndaigona chete kupora w7 pandakatarisa pakanga pasina ubuntu.
R14 © akadaro
Mhoroi, mushure mekufunga kuchinjira ku linux nekuparadzirwa uku ndakave nedambudziko. Ini ndakaisa pamwe nemawoko partitions padhuze windows 7 uye 8 uye mushure mekugadzirisa kudzoreredza grub ine mashoma maitirwo, kana uchisarudza iyo chete linux mit inoonekwa, kwete imwe yeiyo 2 windows. Ndingaite sei kuti ndiwane zvekare masisitimu angu ekare ndisinga fomati? Kwaziso!
Pindura kuR14 ©
Ricardo Ariza Velez akadaro
gadziridza grub2 mune iyo koni uye iwe uchave uine zvese zvinogadziriswa
Pindura Ricardo Ariza Velez
Ngirozi Molina akadaro
Ndanga ndichiedza kuisa mint, asi ndoda kumagumo iyo yekumisikidza hwindo inovhara, isina kunditumira iyo yekupedzisa bhokisi rekumisikidza, uye pandinotangidza komputa haina kutanga Mint, iyo skrini inoramba yakasviba nedzidzo dzichipenya, chii chandingaite ?
Pindura kuna Angel Molina
Rodrigo Frias akadaro
Ini ndanga ndichiedza kuisa Mint pane LVM, asi yakandirova, yakaisa zvese, asi yakakanda zvikanganiso pakuisa grub. Unoziva here chebhuku rekuisa mint seichi?
Pindura Rodrigo Frias
Mhoroi, ini ndiri mutsva ku linux, ini ndakaisa vhezheni ye linux mint 14 nadia, uye zvese zvakanaka, nyaya ndeyekuti handina zvachose muchiSpanish, uye handizive kuti ndoita sei, kana zvekuita kugadzirisa dambudziko iri, raishandiswa kumahwindo izvi hazvina kuitika kwandiri , ndapota ndiudze kuti ndozviita sei, ndatenda pamberi uye ndinotarisira kukurudzira rubatsiro !!!!!! :)
ngatishandise linux akadaro
Kana ndikarangarira nemazvo, iwe unofanirwa kuisa mutauro-pack-es mapakeji (uye nezvimwe zvakadaro) pamwe nemitauro-rutsigiro-es kana chimwe chakadai Tarisa ivo pamwe nemaneja wepakeji.
Pindura kune usemoslinux
Ricardo Fabara Camino akadaro
Kwaziso kubva kuEcuador, makorokoto epamoyo nebasa renyu rakakura. Ndanga ndichishandisa iyo Redmond OS kweanopfuura makore gumi. Munguva pfupi yapfuura, ini ndakadzidza chokwadi nezve Mahara uye Akavhurika Source Zvirongwa, ini ndakatsvaga chaiyo distro kwandiri; Ini ndiri dhizaini uye multimedia webhu kutaurirana; Ndakaiwana muGNU / LinuxMint 10 Cinnammon yeCore i15 laptop: 7 bits, 64GB RAM, 8GB muC (zvirongwa), 165GB muD (ruzivo uye ruzivo rwevanhu). Ini ndoda kuisa iyi distro sebhutsi mbiri, ndatarisa webhusaiti yako asi handizive nzira yekuparadzanisa diski. Ndokumbirawo, zvinoita here kuzviita sekudzidzisa uku kunoratidza: https://www.youtube.com/watch?v=-kP77ULr6pk? Pasina kurasikirwa neruzivo muna D naC. Ndatenda.
Pindura Ricardo Fabara Camino
Kwemakore handina kushandisa zvigadzirwa zve debian / ubuntu asi sekuziva kwangu iwe unongonyora sudo aptitude kugadzirisa grub2 mune iyo koni uye ndizvozvo, mumwe munhu anondiruramisa kana izvi zvachinja, asi ini ndakaita izvi pandakaisa pamwe neimwe mugrosoft os
Pindura kune dmaziado
DARWIN PACHECO akadaro
Kwaziso, sarudzo yakanakisa yekusarasa chero data ndeyekutanga windows zvakajairika, wobva wadzvanya bhatani rekutanga, nyora manejimendi manejimendi, wobva wadzvanya diski manejimendi uye mune yako chaiyo kesi iwe uchadzvanya dhisiki D wobva wadzvanya kurudyi uye sarudzo kudzora vhoriyamu, mune ino nzvimbo ndipo pauri kuzoisa yako nyowani linux OS, inosvika 20 gb inokurudzirwa. wobva waenda pachikamu ichi chitsva kana nzvimbo isina chinhu yedhisiki rakaomarara haugone kugovera chero chikamu kuitira kuti uzviite kana uchinge uchisarudza zvikamu izvo zvichaiswa Linux Mint.
Pindura DARWIN PACHECO
Mhoroi, ini ndoda kuisa linux pane yangu Windows 7 PC, ndinofanira here kuigovanisa?
Pindura kuna Kevin
unogona kuiisa pamusoro peLinux, asi chinhu chinonyanya kukurudzira kwandiri kuita kupatsanura, nekuti kana iwe ukawana kukanganisa mune imwe system haina kukanganisa imwe; iwe uchave uine yakachengeteka zvakanyanya ruzivo rwako rwemahwindo 7.
Pindura kuna dav_id
Ini ndoda, kwenguva yekutanga, kupinda muLinux nyika uye, ndichifanira kuiisa, ndanga ndichifunga kuzviita pane 250 GB partition pane yangu hard drive. Kusiya windows mune imwe chikamu cheyangu hard drive. pane dambudziko here? Ndingaite sei kusarudza iyo inoshanda sisitimu yandinoda kurodha? ndatenda,
Mhoroi, ini ndoda kuiswa windows uye ndinoda kuve nelinux yekushandisa zvese zviri zviviri, dambudziko rangu nderekuti mushure mekuita kumisikidza sekureva kwazviri, uye kana yapera zvakakwana, pandinotangazve lap c inoramba yakanamatira uye inondiratidza inotevera meseji modem maneja : akabata chiratidzo chegumi neshanu, achivhara uye chinoramba chiripo uye pandinotangazve pc nemaoko chinonditangisa ndakanangana nemawindows uye hachizive linux, chii chandinofanira kuita kana chii chiri dambudziko (?
Pindura kune santydzs2
Ndatenda kwazvo negwara, raindibatsira kwazvo.
ruzivo rwavanopa rwakanyanya kunaka
Pindura kuna ESMERALDA
Zvakanakisa kwazvo, ndinofarira izvi
Ini ndiri mudzidzi uye izvo zvandakaverenga nezveLinux ndakafarira zvakanyanya, zvakanyanya ini ndinofunga iyo inoshanda sisitimu yakanaka. Ini ndinoda chinyorwa ichi nekuti chakanyatsotsanangurwa.Ndatenda zvikuru.Ndinotarisira kuramba ndichigamuchira nhau kubva kuLinux.
Pindura kuna erney
unogamuchirwa! mbundira! Paul.
Ndine madhiraivha maviri, imwe yepuraimari uye imwe yechipiri, yekutanga ndinayo Windows 2 uye yechipiri yakarongedzwa. Ndakaedza nemahurongwa akati wandei kuti ndikwanise kubhodhi linux mint asi hapana chinondishandira: kubva kune imwechete yechipiri hard disk ndakairodha pasi kune ino ndokuzoiisa gare gare kana ndichipinda mubios ndichiyedza kubhuya kubva kusecondary, zvinoita sekunge hapana operating system yakaitikawo kwandiri pandakanga ndichida kuiisa kubva kune usb
Linux ndeye crap, haigone kuiswa pc yangu, iyo isina kumboitika kwandiri ine windows, uye saka ivo vanoda kuve iri nani sarudzo?
Zvakanaka, ndasvikawo pano, zvinoitika ndezvekuti paanondibvunza kuti nditangezve MAC yangu, kana zvadzokera kumashure pane zvese zvinoita kunge zvafamba mushe.
Asi zvino kana ini ndapa iyo penguin chiratidzo, yangu skrini inoenda nhema nedashi kumusoro kuruboshwe kwechiratidziri uye inoramba yakadaro.
Jaime Cabrera Maya akadaro
Rakanakisa ruzivo kutizivisa kuLinux. Ndatenda. Ini ndichashandisa iyi kuisa Linux Mint paPC yangu.
Pindura Jaime Cabrera Maya
Kana iri nyowani, yakachena diski. Zviri nani kuisa Linux kutanga uye ipapo Windows? Ndatenda!
Kwete, gadza Windows kutanga wozoita Linux. Kana iwe ukaisa Windows pakupedzisira ichaparadza GRUB uye uchafanirwa kuiisa zvakare.
Ndinoda rubatsiro. Handizive zviri kuitika, zvingave zviri kuitika.
Ndiri kuiisa padhuze neMac OS mune yemahara nzvimbo. Asi pandinowana ndiri mudanho rechina (Kugadzirira kuisa Linux Mint) inosangana nezvinodiwa, ndinozvipa kuenderera uye hazviitike kubva ipapo.
Ndokumbirawo ushandise yedu foramu yeizvi. 😉
Javier Garcia akadaro
Mhoroi masikati akanaka
Ini ndakaisa linux mint 17 uye zvese pasina matambudziko, hazvina kundibvunza chero chinhu kubva muzvikamu uye ndofungidzira kuti ndakachiisa pane yangu C chikamu chaive kwandaive nemahwindo. Dambudziko nderekuti ikozvino kupatsanurwa D hakundizive, ndiko kwandakanga ndiine data rangu rese ...
Pindura kuna javier garcia
Mune yangu linux mint ini handigone kugadzira iyo swap mugove. Ndinozviita sei? Ndeipi data yandinoisa?
Ini ndinofunga zvingave zvirinani kana iwe ukasimudza uyu mubvunzo mune yedu yemubvunzo uye mhinduro basa inonzi Bvunza KubvaLinux kuitira kuti nharaunda yese ikwanise kukubatsira padambudziko rako.
Mhoro shamwari! ndinotenda nekuda kwepositi yako, chokwadi ndechekuti ndaive nematambudziko ekuisa iyo linux mint, uye ini ndaigara ndichi 'batirirwa' pazvikamu. Ndine maviri madhiraivha akaomarara ane matatu zvikamu chimwe nechimwe, ikozvino zvandinoona iwo musoro wenyaya, ndiri kuzodzima zvikamu zviviri kubva kune yechipiri hard drive uye ndozogadzira ivo zvakare sekutaura kwako kuisa Linux.
Kunyangwe kuchengetedza dhata rangu ndiri kuzobvisa rekutanga dhiraidhi kubva kubhodhi pamberi pekumisikidzwa, sezvo ini ndichiona kunze uko mune zvakataurwa kuboka ivo vari kutsakatika dhata uye nekudaro, zvinofanirwa kunge zviri nekuti ivo vanotamba zvakanyanya neiyo partition mupepeti.
Ini ndinowana kukanganisa kunotevera mushure mekuparadzanisa, pakudzvanya pa "gadza izvozvi": "Tafura yekuparadzanisa fomati iri kushandiswa pamadhisiki ako kazhinji inoda kuti iwe ugadzire chikamu chakaparadzaniswa chebhodhi rinotakura kodhi. Chikamu ichi chinofanirwa kumakwa kuti chishandiswe se "EFi bhuti kupatsanura" uye chinofanira kunge chiri 35 MB. Ziva kuti haina kufanana nechikamu chakaiswa pa / bhuti »
Ukasadzokera kumenyu yekuparadzanisa uye kugadzirisa chikanganiso ichi, kumisikidza bhuti kurongedza kunogona kukundikana gare gare, kunyangwe zvingave zvichikwanisika kuisa boot loader kukamuri »
Marty burgos akadaro
Muahahahahaha !!!! (Kukunda kwekukunda).
Aive nematambudziko akakomba neiyo firmware yemadhimoni windows 8.1, uye pakanga pasina kesi yekuisa windows XP kana 7 ...
Ndakarangarira kuti ndaive neLinux Mint disk ... uye yanga isingapfuuri maminetsi mashanu iyo Linux yakaparadza benzi firmware uye ikozvino kumagumo, ndinogona kuisa Windows XP SP 5 sechikamu.
Pindura kuna Marty Burgos
Mhoroi ndanga ndichiedza kuisa ubuntu 16 uye / kana mint papc yangu neW7. Nyaya iripo ndeyekuti ini ndine ma disks maviri, iyo SATA uye IDE, saka ndakafunga kusiya W7 muSATA, zvinova ndizvo zvandinoshandisa zvakanyanya kumafultult uye zvimwe zvirongwa uye ndosiya iyo IDE kutamba neLinux. Dambudziko nderekuti kana ndichida kuisa iyo yakawanda boot ini ndaingogona chete kuwana iyo linux (saka ndakarasa zvachose iyo Windows) ndakatarisa kwese kwese asi ini handina kuzombogona kugadzirisa iyo grub nyaya.
PoEdit dzidziso: maitiro ekududzira emahara software mapurojekiti
ElementOS_Graphite: Imwe theme yeDekorator